मणि शर्मा सोमवार, चैत ७, २०७३ 5180 पटक पढिएको
नेपालमा बढ्दो बेरोजगार छ । काम धन्दा छैन । नेताहरूले जता जाम भन्यो उतै लाग्नु जनताको दिनचर्या भएको छ । नेतालाई भोट दिएर जिताउँछन्, त्यसपछि उनीहरूको काम समाप्त हुन्छ, दलीय राजनीतिमा । त्यसपछि सुखसयलका दिन नेताहरूको ऋण तथा गरिबीको भारी जनताको थाप्लोमा ।
त्यसैले होला भारतीय कवि धुमिलले भनेका छन्- जनता के हो, एउटा भेडा हो । जो अरूको जाडोको लागि आफ्नो पिठ्युँमा उनको फसल बोकिरहेको छ ।
यिनै पुष्पकमल दाहाल हुन्, जो कटवाल काण्डमा प्रधानमन्त्रीको जागिर गएपछि काठमाडौंमा भारतीय विस्तारवादविरुद्ध धम्की दिँदै भनेका थिए—सुगौली सन्धिमा गुमेको पूर्वमा टिस्टादेखि पश्चिम काँगडासम्मको नेपालको भूभाग भारतले फिर्ता गर्नुपर्छ । दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री हुनको लागि केपी ओलीलाई धोका दिँदै भारतको शरणमा परेर भारतको आज्ञाकारी सेवक बन्ने सर्तमा प्रधानमन्त्री बने । भारतको स्वार्थमा दिल्ली पुगेर पच्चीसबुँदे सहमति गरेर आए । खै, टिस्टादेखि काँगडासम्मको हाम्रो भूभाग फिर्ता माग्न सक्ने हिम्मत ? खै, यो मागलाई अन्तर्राष्ट्रिकरण गरेको ? गोविन्द गौतमको भारतीय एसएसबीले नेपालमै आएर हत्या गर्दा दाहालले भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग एक कल फोन गरेर विरोध गर्ने हिम्मत देखाउन सकेनन् । यस्ता हाम्रा प्रधानमन्त्रीले देशको स्वाभिमान र स्वतन्त्रताको रक्षा कसरी गर्लान् ?
कांग्रेस र एमालेको मिलेमतोमा एनसेललाई तेत्तीस अर्ब रुपैयाँ राजस्व मिनाहा दिँदा एमालेजस्तो ‘राष्ट्रवादी’ पार्टीले मौनता साँध्नु, त्यसबारेमा पार्टीको आधिकारिक धारणा बाहिर नआउनु रहस्यमय होइन र ? एमालेले आफ्नो पिठ्युँमा राष्ट्रवादको ऊनको खेती कसको लागि गरिरहेको छ ? हिजो राजतन्त्र छँदा यिनै दलहरू हुन्, गणतन्त्र ल्याउन राजतन्त्रविरुद्ध दलील दिइरहेका थिए—२४० वर्षसम्म राजतन्त्र हुँदा नेपाल अन्धकारमा रह्यो, कुनै विकास भएन, राजा धनी भए, जनता झन्-झन् गरिब ।